Census 2020: Get Counted by September 30 | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Contributor, Columnist » Census 2020: Get Counted by September 30
Posted by kai on Sep 23, 2020 in Contributor, Columnist, Myanmar Gazette |0comments
စက်တင်ဘာ၂၀၊ ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်မှာ စာရင်းကောက်ယူခြင်းပြီးဆုံးတော့မည့် Census 2020 သန်းခေါင်စာရင်း၂၀၂၀အတွက် ကယ်လီဖိုးနီးယားအုပ်ချုပ်ရေးမှူး Gavin Newsom ညွှန်ကြားပြောဆိုခဲ့တဲ့အချက်တွေကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
စက်တင်ဘာ၈၊ ၂၀၂၀ တွင် ထုတ်ပြန်သည်။
ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့စာသက်ကျောင်းတွေ။ ပိုမိုလုံခြုံအန္တရာယ်ကင်းတဲ့လမ်းတွေနဲ့ ပိုပြီးကျန်းမာတဲ့ပတ်၀န်းကျင်ကလူတွေဖြစ်လာဖို့ 2020 Census မှာ
၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာ၃၀မတိုင်မီမှာ ပါ၀င်ဖြည့်ကြခြင်းဖြင့် ကယ်လီဖိုးနီးယားသူ၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားသားများဟာ သက်ဆိုင်ရာကွန်မြူနတီအသီးသီးကို ကူညီနိုင်ပါတယ်။ အင်မတန်ရိုးစင်းလှတဲ့အလုပ်ပါ။ ဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ၊ အွန်လိုင်းကနေဖြစ်စေ လွယ်ကူတဲ့မေးခွန်း၉ခုကိုဖြေဆိုလိုက်ရုံပါပဲ။
COVID-19 ကပ်ရောဂါနဲ့ လူမျိုးရေးကိစ္စများဖြစ်ပွားတဲ့အတွက်ကြောင့် ကျနော်တို့တွေဟာ ကျနော်တို့နေထိုင်လိုတဲ့ပုံစံကမ္ဘာကြီးအကြောင်းနဲ့မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက် ဘယ်လိုများပိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာကိုလည်း တွေးနေကြတာပါပဲ။ Census က ကျနော်တို့ ကွန်မြူနတီအသီးသီးကို ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးစေမယ့် စိတ်ချရတဲ့ရန်ပုံငွေကို ရရှိစေမယ့်အခွင့်ကောင်းပါပဲ။
တရား၀င်လူဦးရေရေတွက်မှုအရ အစိုးရအဆင့်တိုင်းက Census ကို သုံးပြီး ကလေးတွေရဲ့စာသင်ကျောင်းတွေ၊ ကလေးများစောင့်ရှောက်မှုအစီအစဉ်တွေ၊ အာဟာရကိစ္စနဲ့ကျန်းမာရေးအရင်းအမြစ်တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ရန်ပုံငွေတွေကို ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။
ခင်ဗျားတို့ ဒီနေ့ဖြေမယ့်အဖြေတွေဟာ နောင်၁၀နှစ်မှာ ကျနော်တို့အတွက် နေ့ရက်တိုင်းမှာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေပါတယ်။ သင် Census မှာ စာရင်းဖြည့်ခြင်း၊ မဖြည့်ခြင်းဟာ သင်ရဲ့အသက်၆နှစ်ရှိတဲ့ကလေးကို သူတို့အထက်တန်းကျောင်းတက်နေတဲ့ကာလအထိ ကောင်းကျိုး၊ ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါလိ်မ့်မယ်။
Cesus သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယုူခြင်းကို ၁၇၉၀က စခဲ့ပြီး ကျနော်တို့ရဲ့ အမေရိကန်သမိုင်းကို ပြောဖို့ ကူညီခဲ့ပါတယ်။ နောက်ကြောင်းရာဇ၀င်၊လူ၀င်မှုနောက်ကြောင်းအခြေအနေသို့မဟုတ် နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း။ မဖြစ်ခြင်း ဆိုတာတွေကို လုံး၀မကြည့်ဘဲ
အမေရိကားပြည်ထောင်စုမှာနေထိုင်နေတဲ့သူတိုင်းကိုစာရင်းကောက်ယူခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ဟာ ဘယ်သူတွေလဲ၊ နိုင်ငံရေးကိုယ်စားလှယ်ပြုမှုတွေစတဲ့ ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာရုပ်ပုံတွေကို Census က ရေးချယ်ပြီး ကျနော်တို့ဘ၀တွေရဲ့ အခြေခံအုတ်မြစ်တွေအတွက် ရန်ပုံငွေတွေကို သူက ဆုံးဖြတ်ပေးပါတယ်။
Census ကိုဖြည့်ခြင်းအားဖြင့် ခင်ဗျားဟာခင်ဗျားရဲ့ကွန်မြူနတီအတွက်၊ လူမျိုးစုနယ်ပယ်အတွက်၊ ပြည်နယ်အတွက် ရန်ပုံငွေဒေါ်လာကုဋေပေါင်းများစွာကို ဖူဖူလုံလုံကူညီပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ you will help secure billions of dollars of funding for your community, tribal nation and state. သင်နဲ့သင့်အိမ်နီးချင်းတွေဟာ Sacramento နဲ့ Washington, D.C. မှာ ကိုယ်စားပြူသူများဆိုတာ သေသေချာချာသိနားလည်ပါစေ။ လူဦးရေပိုများများတရား၀င်ရေတွက်တဲ့ကွန်မြူနတီများဟာ ဥပဒေပြုရေးနဲ့ လွှတ်တော်မှာ ပိုပြီး ကိုယ်စားပြုမှုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့တရား၀င်ရေတွက်ခြင်းပေါ်အခြေခံပြီး ကွန်မြူနတီရဲ့လိုအပ်ချက်များကို ကူညီပံ့ပိုးနိုင်မယ့် ရန်ပုံငွေကိုလည်း ပိုပြီးရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Census ဟာ “ ကျနော်တို့ဟာ ဒီမှာ။ ကျနော်တို့ဟာ အကြောင်းကိစ္စ။ နောက်ပြီး ကျနော်တို့ရဲ့ကလေးတွေနဲ့ ကွန်မြူနတီတွေအတွက် ဘာ ထိုက်တန်တယ်ဆိုတာ ကျနော်တို့သိတယ်” လို့ ပြောနိုင်ဖို့ အခွင့်အရေးကို ပေးပါတယ်။ ကယ်လီဖိုးနီးယားဟာ ကမ္ဘာ့အများပြားဆုံးဒီမိုကရေစီလူမျိုးကွဲများနေထိုင်ကြတဲ့အထဲမှာမှ လူမျိုးကွဲတွေအများဆုံးရှိတဲ့ပြည်နယ်ဖြစ်တဲ့အတွက် ကျနော်တို့ ဂုဏ်ယူရပါတယ်။ ကျနော်တို့ ရွှေရောင်ပြည်နယ်ရဲ့ ကွန်မြူနတီတိုင်းဟာ သီးသန့်ဖြစ်ပြီး ကွန်မြူနတီတစ်ခုချင်းစီဟာ ထည့်သွင်းရေတွက်ဖို့ ထိုက်တန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကွန်မြူနတီတိုင်းဟာ သူတို့ကိုထည့်သွင်းရေတွက်သင့်တဲ့အတိုငူ် ထည့်သွင်းရေတွက်ခြင်းမခံရပါဘူး
Native Americans, ပြောင်းရွှေ့အခြေချလာသူတွေ၊ အင်္ဂလိပ်စကားမပြောသူတွေ၊ အကွဲကွဲအပြားပြားကွန်မြူနတီတွေနဲ့ကလေးတွေဟာ ထည့်သွင်းရေတွက်မှုအများဆုံးပျောက်ဆုံးနေတဲ့ အထဲမှာပါ၀င်ပါတယ်။ လျော့ပါးစွာထည့်သွင်းရေတွက်ခြင်းဟာ ကျနော်တို့ရဲ့ အသံစွမ်းအင်တွေကို ပျော်ဆုံးစေပြီး ကျနော်တို့ကိုအကျိုးရှိစေမယ့် ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုပျောက်ဆုံးစေပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာရင် ကျနော်တို့ရဲ့အနာဂတ်နဲ့ ရန်ပုံငွေကို ထိခိုက်စေပြီး ကျနော်တို့ရဲ့ ဆေးရူံတွေ၊ မီးသတ်ဌာနတွေနဲ့စာသင်ကျောင်းတွေမှာလိုအပ်တဲ့ ပိုက်ဆံတွေအရနည်းလာပါလိမ့်မယ်။ လူတစ်ယောက်ချန်ပြီး ရေတွက်ခြင်းဟာ နောက်၁၀နှစ်အတွင်း ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာ လူတစ်ယောက်ကို ဒေါ်လာ၁, ၀၀၀ နူံး နစ်နာသွားပါလိမ့်မယ်။
ဘာသာစကားနဲ့ ထုံးတမ်းစဉ်လာအတားအဆီးများကြောင့်၊ အကြောက်အလန့်နဲ့ သတင်းမှားတွေောကာင့် ယခင်က လွတ်သွားတဲ့သူများအပါအ၀င် ကွန်မြူနတီတိုင်းက လူအားလုံးကို ပါ၀င်ရေတွက်နိုင်ဖို့ဟာ ကျနော်တို့ရဲ့ တာ၀န်ဖြစ်ပါတယ်။၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာ ကျနော်တို့ဟာ Census ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကောက်ယူရခြင်းဟာ ကျနော်တို့ကလေးတွေရဲ့အနာဂတ်တွေအတွက်ပါပဲ။-အထူးသဖြင့် သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ရခက်တဲ့ ကွန်မြူနတီတွေထဲက ကလေးတွေအတွက်ပါ။ Non- profit အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အလုပ်လုပ်သူများ၊ လူမျိုးအသီးသီးရဲ့မီဒီယာပါတနာများဟာ ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာနေထိုင်သူတိုင်းပြောတဲ့ သူတို့ရဲ့ဘာသာစကားအသီးသီးကို ပေါက်ဖို့ ကျနော်တို့လုပ်နေတယ်ဆိုတာကို သေချာအောင်အသိပေးစေချင်ပါတယ်။
ခင်ဗျားတို့ဟာ ပို့စာနဲ့ လမ်းညွှန်ချက်များနဲ့ Census ပုံစံစာရွက်မှာ ဘယ်လိုဖြည့်ရမလဲဆိုတာကို လက်ခံရရှိထားပြီးပြီဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ တကယ်လို့ မရခဲ့ဘူးဆိုရင် my2020census.gov online ကနေဖြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် ဖုန်း ၈၄၄-၃၃၀-၂၀၂၀ ကနေ ဖြည့်နိုင်၊ ဖြေနိုင်ပါတယ်။ ဖြေဖို့ အကူအညီလိုတယ်ဆိုရင် ဖုန်းမှာ ဘာသာစကားအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ သင်ဟာ ပို့စာကိုလက်ခံရရှိပြီးသားဆိုရင် ဖြည့်ပြီး စာတိုက်ကနေပြန်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်။
ကလေးများအပါအ၀င် ခင်ဗျားရဲ့အိမ်ထောင်စုမှာပါ၀င်တဲ့သူတိုင်းကို ထည့်သွင်းရေတွက်ဖို့ သေချာပါစေ။ စက်တင်ဘာ၃၀ မတိုင်ခင် ပို့ပေးပါ။ Census ကိုသင်ဖြည့်တယ်ဆိုရင် Cesus ဟာ လုံခြုံပြီး ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအဖြစ်လုံခြုံမှုရှိတယ်ဆိုတာကို သိထားပါ။ ခင်ဗျားဖြည့်ထားတဲ့အချက်အလက်တွေကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ သူများနဲ့မျှေ၀ခြင်းမပြုလုပ်ပါ (သို့မဟုတ်) ခင်ဗျားကိုထိခိုက်အောင် မပြုလုပ်ပါ။ Census အချက်အလက်တွေကို ဥပဒေအာဏာပိုင်ရည်ရွယ်ချက်များဖြသ့်သော်လည်းကောင်း၊ အိမ်ပိုင်ရှင်ကို မျှေ၀ခြင်းသော်လည်းကောင်း ပြုလုပ်လို့မရပါ။ Census ဗျူရိုဟာ သင်၏ Social Security နံပါတ်၊ ငွေကြေးအချက်အလက်နဲ့ ပိုက်ဆံကိစ္စကို ဘယ်တော့မှ မမေးပါ။ 2020 Census ဟာ လူတွေကို သူတို့ရဲ့ Immigration အခြေအနေနဲ့ နိုင်ငံသားအခြေအနေကို မေးမြန်းခြင်းအား တားမြစ်ထားပါတယ်။
Census အဖွဲ့တွေဟာ ယခုလောလောလတ်လတ်မှာ Census မဖြည့်သူတွေထံကို အိမ်တိုင်ယာရောက် စာရင်းကောက်ခံခြင်းကိုပြုလုပ်နေပါတယ်။ သူတို့ဟာပြည်သူ့ကျန်းမာရေးစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာပြီး Mask တပ်ဖို့ လေ့ကျင့်ပေးထားပြီး သင့်အိမ်အပြင်ဘက်မှာ Census မေးခွန်းမေးခြင်းတွေကို
ပြုလုပ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ တရား၀င် Census ကောက်ယူသူဟုတ်တယ်ဆိုတာကို သူတို့ရဲ့ I.D ကတ်ပြားနဲ့ Census ဗျူရိုကအသိအမှတ်ပြုပေးထားတဲ့ဖုန်းကိုကြည့်ပြီး သင်သိနိုင်ပါတယ်။ ထိုလွယ်ကူတဲ့အဖြေ၉ခုကိုဖြေရုံနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ထည့်သွင်းရေတွက်မှုမှာပါ၀င်ခြင်းဟာ သင့်ကွန်မြူနတီအတွက် တောက်ပတဲ့အနာဂတ်ကို သင်ကဖန်တီးပေးတယ်ဆိုတာကို သတိရပါ။
မိဘများအနေနဲ့ သင့်ကလေးအတွက် ကျနော်တို့ မလုပ်ပေးနိုင်စရာ မရှိပါဘူး။ ဒီနှစ်မှာ “ စက်တင်ဘာ၃၀မတိုင်မီကို Census ကိုဖြည့်လိုက်ပါ”
ပိုပြီးသိလိုသည်များရှိပါက အောက်ပါ ၀က်ဆိုက်မှာ ဖတ်ပါ။
Published: Sep 08, 2020 | By Governor Gavin Newsom
Better schools. Safer roads. Healthier neighborhoods.